ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » Via ရာသီခွင်သင်္ကေတပြနမ်းဖို့ကိုဘယ်လို
တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူသင်ရှိသည်ပထမဦးဆုံးနမ်းခြင်းဟာရွက်ပေါက်ဆက်ဆံရေးအတွက်အဆုံးစွန်အချိန်လေးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, နှင့်တစ်ခုခုသင်တို့၏နှစ်ခုအမြဲတမ်းမှတ်မိနေလိမ့်မည်. သင်ကမကောင်းတဲ့ပထမဦးဆုံးနမ်းခြင်းရှိပါက, များသောအားဖြင့်ကကနေပြန်ဆယ်တင်မဆိုမရှိ. သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့သင့်ရက်စွဲကိုနမ်းရမယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့အပေါ်ကိုဖတ်ပါ:
သင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Aries နမ်းတဲ့အခါ, သင်သည်အစာရှောင်ခြင်းအများအားဖြင့်လည်းသွားသို့မဟုတ်ညာဖက်ခဏစောင့်ဆိုင်းနေကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်စရာမလိုပါ. သင်သည်ထိုသူတို့နမ်းဖို့လိုပါလျှင်, မဆိုင်းမတွပြု. သူတို့သည်သင့်ယခုအချိန်တွင်ရမ်းကားနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ခြင်းနာ​​းလည်သဘောပေါက်. ပူနဲ့အသည်းအသန်လုပ်ပါ. သင်ကိုသင်သိသင့်သော်လည်း, သူတို့ဖြစ်ကောင်းသင်တို့အားရှေ့ဦးစွာနမ်းပါလိမ့်မယ်.
သင်ကပထမဦးစွာ Taurus နမ်းတဲ့အခါ, သင်စောင့်ဆိုင်းစေလို. အလျင်အမြန်ပြုမပြုပါနဲ့, နှင့်နမ်းပူမြန်ဆန်အောင်မပါဘူး. ဒီနိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုနှေးကွေးနေမီးလောင်ပိုမိုနှစ်သက်, ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပါစေ. သူတို့ဟာကျောက်ကပ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, ဒါကြောင့်သင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သင်အမှန်တကယ်သူတို့ကိုသွားရသူတို့နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းရှေ့တော်၌မိမိတို့လည်ပင်းလေဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်နမ်းပါ.
သင်ကပထမဦးစွာ Gemini နမ်းတဲ့အခါ, သင်ပထမဦးဆုံးသူတို့ကိုနမ်းချင်တယ်သူတို့ကိုပြောပြ. ဒီနိမိတ်လက္ခဏာမှတပါးအခြားသောထက် သာ. ကောင်း၏စကားကိုတုံ့ပြန်သည်. သူတို့ရဲ့နားအပါး၌ seductively တိုးတိုးပြော, ထို့နောက်အပေါ် nibble. သူတို့ရဲ့လက်နက်ကျွေးမွေးပါလော့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့လက်ကိုင်ထား (Gemini ကအုပ်ချုပ်နှစ်မျိုးစလုံး). အချို့ကပထမဦးဆုံး Gemini လူးလာပြေးပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့များသောအားဖြင့်အားလုံးပရောပရည်လုပ်ခြင်းနှင့်မျှမတို့ pounce င်, ဒါကြောင့်သင်ရဦးမယ်.
သင်ကပထမဦးစွာကင်ဆာနမ်းတဲ့အခါ, သင်သည်ထိုသူတို့အစဉ်အလာများနှင့်အဆင်ပြေပတ်ဝန်းကျင်တွေလိုပဲသင်သိသင့်သည်, ဒါကြောင့်အိမ်တံခါးပေါ်တွင်ရက်စွဲနဲ့ရဲ့အဆုံးမှာပြု. သင်သည်ထိုသူတို့နမ်းတဲ့အခါ, သူတို့ဘေးကင်းလုံခြုံသည်ဟုခံစားရသကဲ့သို့, သင်၏လက်နက်၌သူတို့ကိုင်ထား. ကရှည်လွန်းသွားမခံပါနဲ့, နှင့်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါဘူး.
သင်ကပထမဦးစွာ Leo ဘက်ကိုနမ်းတဲ့အခါ, သင်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းအံ့သြဖွယ်ပါစေ. ထိုနိမိတ်ဘဝရုပ်ရှင်တူဖြစ်ချင်သော, နှင့်သမားရိုးကျနှင့်ငြီးငွေ့စရာတစုံတခုအားဖြင့်ရှက်ကြောက်လိမ့်မည်. ထိုလရောင်အောက်, သူတို့နမ်းပါ, မိုးရေအတွက်, ဒါမှမဟုတ်လမ်းမအလယ်၌. ဒါကြောင့်စိတ်အားထက်သန်စေပါနှင့်ခပ်ယူ.
သင်ကပထမဦးစွာ Virgo နမ်းတဲ့အခါ, ရှေ့မသင့်အသက်ရှုစစ်ဆေး. သင်ညစာစားခြင်းငှါသွားကြ၏ဆိုရင်, သေချာဘာမျှမသင့်အံသွားခဲ၌စိုက်သည်နှင့်သင်တဲ့ Mint pop သို့မဟုတ် mouthwash သုံးနိုင်တယ်စေရန်မထွက်ခွာမီရေချိုးခန်းထဲ hit. အဘယ်အရာကိုမျှတဲ့ညစ်ပတ်ပေရေနှုတ်ကိုနမ်းထက်ပိုသူတို့ကိုပယ်ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်. သူတို့အမှန်တကယ်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယကိုသိသောကြောင့်ကောင်း technique ကိုကျင့်သုံးပါ.
စာမကျြနှာ: 1 2